Col. C\_laahi Yusuf oo doonaya inuu dhiso ciidan qaran oo heybtiisa ah iyo kooxaha dagaaloogayaasha Muqdisho oo dhisaya maleeshiyooyin calooshooda u shaqeystayaal ah
Buluugleey, April 16, 2006
Col. C\_llahi, Shariif Xasan, iyo Prof. Geedi ayaa dadaal adag ugu jira sidii ay lacag uga heli lahayeen deeq bixiyeyaasha caalamka oo u badan Yurub si mid walba oo ka mida uu uga helo saamigiisa. Dhinaca kale qabqablayaasha dagaalka Muqdisho ayaa iyaguna dadaal ugu jira xiriiro qandaraas oo ay la sameynayaan xoogag shisheeye si ay uga helaan dhaqaale ay uga maarmaan ku xirnaanta dowlada Col. C\_llahi Yusuf iyo kaalmada laga sugayo beesha caalamka.
Shariifka ayaa doonaya in la maalgeliyo Baydhabo oo uu doonayo inta ka dhiman wakhtiga ka haray xiliga loo qabtay gudoomiyenimadiisa in dowlada ay ku dhameysato joogitaanka Baydhabo. Isagoo arrintaas u arkaya mid fursad u siin karta inuu doorashada labaad isku soo taago jago tan ka culus. Dhinaca kalena doonaya kaalmada laga helo beesha caalamka in xoogeedu uu ku baxo baydhabo oo uu ku leeyahay shirkado ganacsi oo aad u xoogan.
Geedi ayaa doonaya inuu adkeysto xilkiisa, waxaana marar badan saxaafada Gobolka Bari la soo geliyey in la bedelayo oo dad ay isku heyb dhowyihiin lagu bedelayo, taas oo looga jeedo inuu ka soo go’ siyaasada uu ugu lug xiran yahay dagaaloogayaasha Muqdisho iyo in la geliyo dareen ah haddii uusan sidan isku dhaamin in laga tashanayo. Geedi ayaa hadda u muuqda inuu ku jiro marxalad adag, waayo ma ahan shaqsi laga jecel yahay degaanka Muqdisho, sidoo kalana ma ahan mid laga jecel yahay dhinaca kornrylka. Mar haddii ay kici weysey dowladii loo xilsaaray inu socodsiiyo, khilaafna uu ka dhamaan waayey isaga iyo madaxda kale ayey dad badan u arkaan nimaan siyaasada ku sii jiri karin. Geedi ayaa la filayaa inuu ku fara adeygo xilkiisa inta uu ka helayo saamiga uga soo aada lacagaha dibeda laga rajeynayo, taas oo muujineysa in khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya isaga iyo Shariifka iyo Col. C\_laahi uusan cadeyn. Wuxuuna meel marinta fikirkiisa uu la hoos galay Itoobiya oo uu aaminsan yahay iney meesha keentay, iyadana uu u joogo jagada ay u soo xilsaartay, taas oo Col. C\_llahi gelisey cadaadis looga horkeenayo inta raacsan Itoobiya.
Col. C\_llahi ayaa taladiisu waxey ku aadan tahay inuu dhiso ciidan qaran oo ka kooban maleeshiyooyinka ay isku heybta yihiin oo uu ka soo uruuriyey gobolka Bari. Ujeedada uu hadda xooga u saaray inuu saamigiisa ku maalgeliyo ciidamadaas ayaa waxaa loo fasiray inuu damacsan yahay inuu Baydhabo sannad kadib isaga guuro, inta sannadkaasna uu isku diyaariyo sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa magaalada Kismaayo, taas oo uu doonayo xaruun rasmiya inuu uga dhigto dowladiisa. Wuxuu Col. C\_llahi aaminsan yahay haddii uu ku guuleysto gacan qabashada Kismaayo inuu beelweyntiisa ku beerdulucsan karo in si wada jira ay ula duulan si ay xoog ugu muquuniyaan nimankii ridey dowladdii Siyad Barre. Waxaa la aaminsan yahay in Col. C\_llahi uu yahay nin ku shaqeeya qabyaalada oo ay wax walba kala weyn tahay, sidaasna uu ku helayo beelo badan oo ay isku heyb dhow yihiin oo hilow uu u hayo iney soo ceshedaan xukunka oo ay dib ugu qabsadaan awood qabiil.
Dagaaloogayaasha Muqdisho oo dareensan hub iyo ciidan urusiga Col. C\_llahi ayaa bedeley xeeladoodii siyaasadeed si ay u helaan hub, lacag iyo ciidanba. Waxey abuurteen isbaheysi ay kula dagaalamayaan wadaadada, taas oo loo fasiray iney hub uga helaan Yuuhuuda, Mareykanka iyo Itoobiya, wadamadaas oo soo dhoweeyey dagaalka ay kula jiraan kooxdaas dadka dembiilayaasha ah. Waxey dhowaan heleen lacago loogu tala galay iney ku qortaan calooshooda u shaqeysteyaal ay ka soo qortaan beelahooda, taas oo lagu qiyaasay in qofkiiba la siiyo lacag dhan saddex boqol oo doolarka Mareykanaka, in kastoo dagaaloogayaahu ay si hoose u gaareen in qofkiiba ay ku qortaan boqol iyo konton doolar. Ujeedada ay u qoronayaan ciidankaas waa ay ka weyn tahay iney Xamar la wareegaan gacan ku heyntiisa, waxaana inta badan lagu macneeyey iney isku diyaarinayaan dagaal dhexmara iyaga iyo Col. C\_llahi si ay awooda dalka ugu kala baxaan. Waxaa la xaqiijiyey in Itoobiya ay arrintaas ay ka qaadaneyso doorkeeda iyada oo ka sii riixeysa Col. C\_llahi inuusan si buuxda u hanan madaxtinimada Soomaaliya oo dhan, daneyneysana gobolada Soomaaliyeed iney kala qeybsanadaan. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyey in qolooyin shisheeya oo la shaqeynaya Q.M ay doonayaan liis uu ku jiro Col. C\_llahi oo loo heysto dacwado xasuuqa iney daneynayaan inuusan helin madaxtinimo fursad u siisa inuu caalamka soo dhexgalo taas oo wadamada reer galbeedka madaxdooda ku noqoneysa wejigabax. Waxey sidoo kale dagaaloogayaasha Muqdisho ay qandaraasyo la galeen xoogag shisheeye oo ay ka amar qaadanayaan una fulinayaan go’aanadooda, kuwaas oo loo arkay liisas loo soo dirayo dadkooda iney soo qabtaan si maxkamad loo horgeeyo ama ay u soo dilaan dadkaas.
Waxey sida badan noqotay xeelad lagu leynayo hogaamiyeyaasha dagaalka in iyaga dhexdooda dagaal la isaga horkeeno, maxaa yeelay waxaa aad u adag in hogaamiyeyaashaas la soo qabto oo mid walba uu ku dhex dhuumanayo degaanka beeshiisa. Waxaa sidoo kale adag in dibeda laga soo qabto, iyaga oo aysan socodkooda dibeda aysan sidaas u badneyn ama marka ay soo baxaan oo ay ku hagoogan tahay dowlad shishheye oo aan loo gacan dhaafi karin. Waxaa kaloo weli socda is afgarasho iyo dadaalo lagu meel marinayo soo horkeenid maxkamad caalamiya oo ku qaada dembiyada ay ka galeen meel ka dhacyada ay u geysteen rayidka ay dagaalada ku xasuuqeen, waxaana ilaa iyo hadda hortaagan dadaaladaas ay ka shaqeynayaan ururo caalamiya wadamada dibeda ka taakuleynaya hogaamiyeyaasha dagaalka, kuwaas oo aaminsan in sida keliya ee wax looga qaban karo qabqablayaasha Soomaaliyeed iney tahay in lagu dilo dagaal, maxkamadna aysan keeneyn xal maadaama hab beeleed la isku xasuuqay, taasna ay tahay wax dhaqanka Soomaaliyeed weligeed ka soo jirey.
Iska soo horjeedka ka jira madaxda dowlada ay soo dhistay IGAD waa mid laga soo qorsheeyey dibeda. Khilaafka nimankaas iyo kuwa Muqdisho ayaa danahoodu kala duwan yahay. Shariifka iyo Geedi waxey dantoodu tahay waa iney helaan dhaqaale, meesha Col. C\_llahi iyo wasiiradiisa hubeysan ee Muqdisho ay daneynayaan dagaal iyo guul ay ku hantaan awood ciidan. Col. C\_llahi ayaa qorsheynaya inuu awood ciidan ku xukumo Muqdisho, meesha dagaaloogayaasha Muqdisho ay qorsheynayaan in cudud ciidan ay ku ridaan dowlada Col. C\_llahi oo ay mariyaan jidkii uu maray Siyad Barre. Col. C\_llahi oo horay u soo ahaa dagaalooge dhiig Soomaaliyeed soo daadiyey iyo dagaaloogayaasha Muqdisho oo soo xasuuqay rayidkii Muqdisho midna taladiisu xal uma ahan shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale hogaamiyeyaasha rayidka ah ee hadda saldhig ka dhigtay Baydhabo oo dantooda saldhig uga dhigay damiir ku kooban xoolo doon, qabyaalad wax ku qeybsi, musuqmaasuq, iyo dano gaara iyaguna ma ahan kuwii dalka u horseedi lahaa dowlad caafimaad qabta oo dadkeeda u keenta maamul ku dhisan cadaalad iyo aqoon. Xalka keliya ee ummadda Soomaaliyeed u furan waa iyadoo dib uga shirta sidii ay dalkeeda uga arrinsan lahayd iyadoo aan dibeda lagala soo talineyn. Shir dibeda loogu soo dhisay dowlad ma keenayo xal Soomaaliyeed, waxa keliya oo ay madaxdaas u adeegayaan waa danaha shisheeyaha ee soo dhistay.